Samsung oo dhan share ayaa had iyo jeer ahaa mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu fiican ahbaa horumarinta Samsung Electronics Pvt. Ltd. la bilaabay sanadkii 2012, waxaa loo soo sameeyay sida isku xigxiga oo ay ku wadaagaan iyo files dukaanka. App ayaa waxaa ka hor ku rakiban inta badan qalabka Samsung ahbaa oo soo rogmaday inuu si fiican runtii. Mid ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee Samsung AllShare waa in ay u saamaxdo helitaanka aaladaha kala duwan. Tani waxay u ogolaaneysaa in ay faa'ido kale sida internet lahayn waa u baahan yihiin si xubnuhu qalabka si loo soo wareejiyo files. App ahbaa sidan oo kale in ay u saamaxdo muhiim ah oo kale si ay u qalabka kale ee la conjointly socda App AllShare ah.
Waa hagaag, waxaa jira sababo gaar ah sababta Apple Mac ma heli karo la App AllShare ah. Apple Air ayaa waxa ay ku egtahay sidan oo kale in kaliya qalabka tufaax la xiriiri kartaa kasta oo kale ah. Kaqabto waxaa ka walwalsan, App AllShare marnaba la shaqayn doonaan qalabka tufaaxa. Tani waa sababta keliya oo qaabeynta nidaamka Apple Air waa arrin ka duwan yahay kii AllShare App oo sidaasay dareemeysaa kaliya qalabka inankeeda u dhow. Dhinaca kale, App AllShare waa la jaan kala duwan oo cantoobo muggeed ha qalabka tagaan oo ay la socdaan OS sida Windows, Android iyo kuwa kale a. Waxa kale oo jira arrin kale oo DLNA ay isticmaalaan Samsung ah ee app. App AllShare ayaa loo qaybiyay la DLNA in soo for isku xirnaanta ee ay hindiseen.
Si kastaba ha ahaatee, si gurmadka ah oo dhan, waxaa jira xal qaar ka mid ah in ay ku soo kacay. Ayaa ugu horreeya oo dhan, haddii aad ka heli Apple ah horumariyo TV ama Mac Kitaab, ka dibna aad u leeyihiin in ay isticmaali Apple Air ka. Mar walba waxaa jira dhibaatooyin caadi ah oo lala iman lahaa inta badan smart telefishin.
TALLAABADA 1: Haddii aad hesho TV caqli iyo wax kasta oo kale Apple ahbaa phone smart, waxaa hubaal ah ma aha doorasho wanaagsan, si ay u tagaan, waayo.
TALLAABADA 2: saasaana wax soo socda in dhici kartaa waa in aad la wadaagin karo files ama muusiko dhegayso.
TALLAABADA 3: xalka ugu sahlan ee uu noqon lahaa oo kaliya in ay iibsadaan set ah television tufaax ahbaa in uu noqon doono sida xaqiiqada ah la jaan qaada this. Qalab Apple ayaa keenaysa in qofka si aad ula xidhiido leh qalabka wirelessly.
TALLAABADA 4: Tani waxay noqon doontaa fududahay in aad kala iibsiga ah ee files iyo sidoo kale music kale oo u oggolaan doonaa ciyaaraha.
Waxaa jira hal xal kaliya kale welwelkaaga. Tani ma aha oo kaliya sababta oo ah iibsashada TV Apple ah laakiin tani waa iska sahlan runtii. Wondershare TunesGo waa sida app ah in halkan ka soo bixi waayo, dhammaan xalka welwelkaaga ka. Waxaad iyaga oo gargaar ka Wondershare TunesGo wadaagi karaan faylasha. Wondershare TunesGo waa portal ah meesha aad xal u ah dhammaan ka walwal ah ee qalab aad ka heli kartaa. TunesGo Wondershare u laabanayaa kor u keeno in kale oo badan oo kale oo qalabka aad. TunesGo Wondershare ayaa Yeelanaya u bedela badan oo muujinaya in ilaa barnaamijyadooda kale oo badan si aad kor ku wajahan qalabka kala duwan si ay u xiriiriso.
TunesGo Wondershare waxaa horumariyo si sida in ay noqoto kor u downloads iyo isticmaalka u barnaamijyadooda badan ah. Downloads waa user saaxiibtinimo iyo isticmaalka aad u socon. Tani waxay noqon kartaa ilaa ilaa garab qalabka badan. Downloads in TunesGo Wondershare waa si degdeg ah oo ammaan ah.
TALLAABADA 1: Download iyo rakibi TunesGo Wondershare ee aad telefoonka smart iyo sidoo kale Mac ah. Taasi waxay u dhigantaa a faa'iido wanaagsan dhabta ah ee dhammaan dadka isticmaala si ay u isticmaalaan TunesGo Wondershare iyo xubnuhu qalabka wax qaybsi kama dambaysta ah iyo horumarinta kale ee Dalka Chine.
TALLAABADA 2: taas oo keliya ma, TunesGo Wondershare ee ku jira database a kaas oo ugu dambeyntii u horumarsan ugu music si ay u dhegaystaan. Database waxaa kaloo ku jira oo dhan qaababka kale oo run ahaantii waxtar leh waa dhab.
TALLAABADA 3: kan ahayn, Wondershare TunesGo caawisaa dadka isticmaala sida android iyo sidoo kale daaqadaha si aad xiran. Wondershare TunesGo u ogolaanaya casriyaynta uu nool yahay in kor qiimaha dhabta ah. The rakibayo Wondershare TunesGo yimaado hab waafaqsan xitaa telefishannada smart oo ay dhab ahaantii waxtar leh waa dhab.
TALLAABADA 4: TunesGo Wondershare laga heli karaa labada fursadaha soo gato iyo sidoo kale arrimo kale sida maxkamad lacag la'aan ah. Wondershare TunesGo waa go dhab ah downloads haddii aad helitaanka taleefanka smart.
> Resource > Mac > Mac uma shaqeeyo on Samsung AllShare?